QM oo u hanjabtay Boko Xaraam - BBC News Somali
QM oo u hanjabtay Boko Xaraam
Image caption Dad ka qeyb galaya olole loo sameynayo gabdhaha ay Boko Xaraam afduubteen
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa ku tilmaamtay inuu dembi yahay afduubka boqollaalka gabdhood ee dalka Nigeria, waxayna ku cagajugleeyeen in la qaadayo tallaabo ka dhan ah Boko Xaraam oo ah kooxda qafaalka ka dambeysay.
Golaha ayaa ka digay qafaalashada dad badan inay ka dhallan karto xadgudubyo ka dhan ah aadanaha.
Waxeyna dalbadeen in sidegdeg oo shuruud la’aan ah loo siidaayo gabdhaha, sidoo kale waxey sheegeen in goluhu uu eegi doono tallaabo ku haboon oo laga qaado Boko Xaraam, haddii aysan gabdhahasi siideyn.
Taasi waxa uu micnaheedu noqondoonaa in liiska madow lagu daro kooxda, ama in cunaqabatayn la saaro xubnaha ugu sareeya.
Image caption Ciidamada Nigeria oo bilaabay raadinta gabdhaha, kuna sugan xero ay lahaayeen Boko Xaraam
Khubaro ka socotay dalka Mareykanka iyo Britain ayaa gaaray Nigeria si ay gacan uga siiyaan dowladda howlgalka lagu soo badbaadinayo gabdhaha.
Waaaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in inkabadan toban qof oo ah saraakiil meleteri iyo xubno kaloo katirsan laamaha dowladda ay ku biiri doonaan khubarada hadda ka jooga magaalada Abuja.
Waxa ay ka caawin doonaan uruurinta wararka sirdoonka, talo siinta meleteriga xilliga diyaar garowga iyo howlgalada, taageero dhanka farsamada ah, iyo caawin dhanka wadaxaajoodka dadka la afduubtay.
Xubin sare oo Mareykanka u hadlay ayaa sheegay in sidoo kale ay tixgelin doonaan codsiga dowladda Nigeria ee ah in diyaarado ay raadinta ka qeyb qaataan.
Culimada Muslimiinta Caalamka
Dhanka kale, hogaamiyayaasha Muslimiinta ayaa cambaareeyay hogaamiyaha kooxda Boko Xaraam, kadib markuu sheegay inuu iibinayo gabdhaha ay Iskuulka ka afduubteen si ay u adoonsadaan.
Muftiga dalka Sacuudiga, ayaa sheegay in Boko Xaraam ay diinta si qalad ah u fahmeen ayna xumeynayaan muqaalka Islaamka.
Waxaa kaloo uu sheegay, guursashada gabdhahan inaysan diinta Islaamka marnaba oggoleyn.
Isbuucan, hogaamiyayaasha Muslimiinta caalamka ayaa dhaleeceeyay Boko Xaram, kadib markii hogaamiyaha kooxdaasi uu sheegay in Alle uu farayo iibinta gabdhaha iyo in xoog lagu guursado.
Khamiistii, ururuka iskaashiga Islaamka, oo ah ururka ugu weyn Muslimiinta caalamka, ayaa cambaareeyay afduubkaasi.
Waxeyna sheegeen in tallaabada afduubka ay muujineyso in Islaamka si qalad ah loo fahmay.
Kol sii horeysay, sheekha Al-azhar oo ah xarun diinta Islaamka laga barto oo ku taalla dalka Masar, waxa uu sheegay in diinta Islmaamka ay diiday afduubka.